Forum serasera malagasy http://forum.serasera.org/forum/message/m516f8ca5df098 - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : http://forum.serasera.org/forum/message/m516f8ca5df098
Nehemiah - 26/04/2013 15:18
Mankafy an'i Bruce Willis ve ianareo ? Izaho aloha dia miaiky fa mahay milalao sarimihetsika lavitra nohon'i Tsarafara izy, ary aleoko lavitra mijery anankiray @'ireny sarimihetsika "Un jour en enfer" ireny na "Piège de cristal" toy izay Malok'Ila 22.
Fa izy kosa dia manan-ko lazaina momba ny maha-sahaza ny finoana sy ny fivavahana, izao no nolazainy t@ "U.S.A. Weekend" :
Izao no fandehan'ny fivavahana voarindra fahiny : raha tsy manao izao sy izao sy izao ianao, raha tsy manana fitondran-tena tsara, tsy maintsy any @ helo no iafaranao. Indrisy fa tsy misy olona manan-tsaina na dia kely aza mino an'izany farihy mirehitr'afo sy solifara izany intsony nohon'ny fahalalàna vaovao ananantsika @ resaka siansa. Hany ka lasa tsy manan-kery intsony ny feon'ny fivavahana voarindra. Ary mitarika antsika @ fikoroso fahan'ny sivilizasiôna ny haino aman-jery.
Inona kay izao siansa resahany izao ? Nanala bacc S (scientifique) tany @ Lifra aho (15/20 ny maths, 14/20 ny S.V.T. sy fizika), ka angamba tsy dia azo lazaina ho "be stila" loatra aho raha milaza aminareo fa mba manana fahalalàna ifotony @ resaka siansa aho. Ka lazaiko aminareo marina tokoa fa misy karazana 2 ny siansa.
_ Ny voalohany dia ny siansa ara-panandramana. Ity misy ohatra : indray andro, hono, niakatra tany ambonin'ny tilikambon'i Pisa i Galileo Galilei (1564-1642), miaraka @ balana tafondro 2, ny 1 lehibe dia ny 1 kely. Rehefa tonga tany @ tampony dia niara-nalatsany avy any ny balana tafondro 2. Noheveriny fa ny bala lehibe no tsy maintsy mitotona voalohany, araky ny filôzôfia grika neken'ny daholobe t@'izany, kanefa niara-nitotona izy 2. Nihevitra izy fa nanao diso, ka nanandrana indray mandeha izy, nefa mbola niara-nitotona ihany izy 2. Dia mbola naveriny ihany, ary naveriny, ary naveriny, farany dia lasa nitongilana ny tilikambo dia voatery najanona ny fanandramana lol .
Ka inona izany no nataon'i Galileo t@'iny ? Mekanika ara-panandramana. Tranga izay hitan'ny masony no nodinihany sy niasany. Naverimberiny ilay izy ka lasa nisy petra-kevitra nipoitra tao anatin'ny eritreriny.
Izay no atao hoe siansa ara-panandramana : siansa izay mikarakara momba ny tranga @ ankehitriny, izay hita maso, azo anaovana fanandramana, azo averimberina. Io siansa io no nahazoantsika ny teknôlôjia rehetra manodidina antsika izao, na ny tele, na ny sambon-danitra, na ny vaksiny, na ity serasera ity dia vokatr'io siansa ara-panandramana io avokoa.
Ary angamba miombon-kevitra isika fa hitovy foana ny fandehan'ireto teknôlôjia ireto, na 3 mn izao tontolo izao na 80 miliara taona. Tsy misy idiran'ny taonan'izao tontolo izao ny siansa ara-panandramana.
_ Ny resaka taona indray dia sahanan'ilay karazana siansa faha-2 : ny siansa ara-tantara.
Jereo ity sarin'ny tanana malazan'i Carcassonne, atsimon'i France, ity. Novatsian'ny fanjakana ilay mpahaimaritrano (architecte) Eugène Violet-le-Duc (1814-1879) t@ faramparan'ny taon-jato faha-XIX mba hanamboatra ny châteaux izay efa t@ andron'ny Moyen-Âge, ary tao anatin'izay koa i Carcassonne. Toy izao ny vokany.
Kanefa izao ny olana : tsy mba maranitra tahak'izao ny tafon'ny châteaux t@ Moyen-Âge, satria rafitra fiarovana tanàna ireo tilikambo ireo ary tsy maintsy tifirina zana-tsipika ny fahavalo ! Naveriny @ fomba manaraka ny haisoratra mampihetsi-po (romantisme) ny Moyen-Âge : izay no fiheverany manokana ny Moyen-Âge, fa saingy tsy mba toy izao mihitsy ny tena izy. Angamba resaka "princesse en détresse" no tena nibahana tao an'eritreriny t@'izy nanamboatra an'ireny .
Hitanareo, izay no tena mahavoa ny siansa ara-tantara : mampiasa modely ankehitriny mba hamantarana ny lasa. Tsy misy olona afaka mahita ny lasa raha tsy mamorona "machine à remonter le temps" (ary raha misy hamorona an'izay @ ho avy dia angamba azo apetraka ny fanontaniana hoe aiza daholo ny mpizaha fotoan'andro avy @ ho avy ). Tsy hay anaovana fanandramana ny lasa ary tsy misy porofo mivantana ny tranga t@ lasa (mazava loatra) fa porofo mifarango.
Ity misy ohatra hafa izay tena malaza @ resaka siansa : t@ taona 1858, i Richard Owen, ilay mpahairafibatana (anatomiste) malaza izay namorona ny teny "dinôzôra" ary nanorina ny Donia Britanikana Tantara Natoraly (sady mpanohitra ny fotopisainan'ny evôlisiona @ alalan'ny fantina natoraly noforonin'i Darwin koa izy), dia nandinika ny momban'ny karan'ny dinôzôra iray izay nantsoiny hoe "Iguanodon".
Rehefa nahavita nanamboatra ny karan'ilay dinôzôra izy dia nisy taolana kitsoloha 1 tafajanona. Sahirana be izy : mandeha aiza ary ity taolana ity ? Farany dia napetrany t@ orony ilay izy satria lany aiky dia neveriny ho tandrok'orona ilay izy.
Mbola hita mandrak'ankehitriny any @ Lapa Kristaly ny sary vongana nampanamboariny. Mampieritreritra rinôserôsy-androngo izany ilay izy.
Kanjo, 20 taona taty aoriana, nahitana fiandronan-taolana dinôzôra goavana be ny tobim-pitrandrahana sarbô tany Bernissart, 7 ny @'ireny no Iguanodon, ary toy izao no tena endriny :
Kay ve ny ANKIHIBEN-TANANY ilay taolana kitsiloha iny !!! Sady @'izay hitantsika fa nandeha tongo-droa izy fa tsy 4-tongotra.
Izay no mitranga rehefa ny ankehitriny no entina hamantarana ny lasa kanefa tsy ampy ny fahalalàna ananantsika momba ny lasa : misy diso foana ny siansa ara-tantara, na tantaran'izao tontolo izao izay, na tantaran'ny fiainana, na tantaran'ny olombelona, ary tokony azontsika an-tsaina fa na dia ny manam-pahaizana lehibe indrindra aza dia tratran'izay.
Nehemiah - 26/04/2013 15:19
Io ny rohy mankany @ fizaràna faha-3 ho an'izay liana :
AndriambyII - 26/04/2013 22:23
L' experimentation !
Nehemiah - 27/04/2013 07:02
Misy fomba tokana ahazoana antoka momba ny zavatra nitranga t@ lasa dia ny fijoroana ho vavolombelon'ny olona mahatoky, azo antoka fa mitantara ny marina, ary ny Genesisy dia fijoroan'ny Andriamanitra Fahamarinana momba ny fahariana.
Nehemiah - 27/04/2013 14:08
Ity koa ny rohy mankany @ fizaràna faha-5 :
Miharena - 29/04/2013 03:42
Tsy misy olona afaka mahita ny lasa raha tsy mamorona "machine à remonter le temps" (ary raha misy hamorona an'izay @ ho avy dia angamba azo apetraka ny fanontaniana hoe aiza daholo ny mpizaha fotoan'andro avy @ ho avy
Tsy machine no ampiasaina raha hi-remonter le temps fa ny singa mandrafitra ny olombelona toy ny astral.
Nehemiah - 29/04/2013 05:44
Lol. Efa nampiasa an'izay ve ianao ?
Miharena - 29/04/2013 07:04
Tsy mapme anie izany namana fa zava-misy.
Azonao anontaniana ireny mpanao arts martiaux ireny raha tsy matoky izany fisiana toe-javatra toy izany ianao. Ary koa azonao vakiana ny fijoroana vavolombelona maro momba izany rehefa misy olona iray mitantara ny nanjo azy rehefa mty nefa naverina hiaina indray hijoro.
Misy ny atao hoe anale akashique, izay mandrakitra ny zava-drehetra toy ny film, ary io no mety ataon'ny kristianina hoe tsy maintsy hojerena rehefa tonga ny fitsarana farany ho an'ny olona tsirairay. Izany hoe hita ao toy ny film avokoa ny niandohan'ilay olona, ny tantarany rehetra, eny na dia ny fitsingerin'ny fianany aza (réincarnation répétitive).
Nehemiah - 29/04/2013 07:45
Ka tsy nataoko amelabelaranao ny New Age-nao anie ilay lohahevitra